Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Layaabka Leh Ee Ku Duugan Hayl-Dhagoolaha Iyo Sinjibiilka – Xeernews24
Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Layaabka Leh Ee Ku Duugan Hayl-Dhagoolaha Iyo Sinjibiilka
12. November 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waxa aynu ku jirnaa maalmo qabaw badan oo jiilaal ah, waa xilliga dadka intiisa badani ka cawdaan hargab iyo lafo xanuun. Waxa aan eegi doonaa laba geed oo aad u muhiim ah marxaladdan oo kale iyo sida caadiga ahba nolosheena muhiim u ah.
-Hayl-dhagooluhu waa ubax qallalan oo ka baxo geedka loo yaqaanno “Cloves”, waana midho aad u leh faa’iidooyin cunno iyo caafimaadba, waddanka ugu badan dunida uu ka baxo waa Zanzibar.
-Hinidya iyo Shiinuhu waxay u adeegsan jireen hayl-dhagoolaha ama dhago-yaraha 2000 sano ka hor daawaynta urka afka, waxaana la siin jiray qof walba oo soo booqanayo boqorka si uu afkiisa u carfiyo.
-Haddaan u gudbo faa’iidooyinka cunno, Hayl-dhagoolaha ama dhagayaraha waxaa ku jira protein, birta, kalshiyamka, botaasyam, sodyam, fitamiino sida A iyo C.
-Hayl-dhagooluhu waa xanuun baab’iye aad u fiican waxaana loo adeegsadaa daawaynta ilkaha, sababtuna waa saliidda ku dhex jirta ee loo yaqaanno “eugenol oil”, waxaana la helaa iyadoo ka samaysan, kareem, daawada lagu cadaydo iyo midda lagu luqluqdaba.
-Faa’idada kale waxay tahay in lagu daaweeyo roomaatiisamka iyo guud ahaan lafo xanuunka iyadoo la marsado xubnaha ku xanuunayo, haddii qiiq ahaan loo shito oo biyo kulul lagu daro waxaa lagu daaweeyaa, sanboorka iyo neefta.
-Waxay kaloo faa’iido u leeyahay in bakteeriyadu ay disho waxaa lagu nadiifiyaa nabarada, dhaawacyada iyo fangaska gala faraha lugaha dhexdooda.
-Faa’iidada kale waxaa ka mid ah in lagu daaweeyo dheefshiid xumada, shubanka iyo calool majiirka (Casiraadda), waxaana ku jira hayl-dhagoolaha maaddo u eg aysiidha caloosha laga helo oo ka qayb qaadata shiididda cunnada iyo la dagaallanka bakteeriyada caloosha.
-Faaidada badanaa laga sheekeeyo oo cilmi-baadhayaashu ay ogaadeen waxay tahay in hayl-dhagoolaha la arkay in unugyada kansarka ee ku dhaca sanbabada iyo maqaarka inuu dilo, sidaa awgeedna loo adeegsado ka hortagga kansarka labadaasi nooc.
-Waxaa waa dhawayd lagu daray kansarka calooshana inuu ka hor-tag fiican u yahay, maadaama cunnooyinka sumaysan oo kansarka u keeni kara caloosha in uu sifeeyo.
-Faa’iidooyin badan oo lagu sheego hayl-dhagoolaha ayaa jira waxaana ku soo gabagabeynayaa inuu difaaca jidhka sare u qaado, in sonkorta dhiigga hoos u dhigo iyo in dhiig xinjirowga uu ka hortago iyo waliba in uu hargabka si weyn u daaweeyo. Faa’iidooyinkaasi dhanna waxaa laga helaa saliiddiisa, haddii saliiddiisa oo saafi ah la helo way fiican tahay laakiin haddii aadan hubin isaga oo sidiisa ah isticmaal.
Sanjabiilku wuxuu ugu horreeyaa geedo daaweedyada, waxaana laga isticmaalaa waddamo aad u badan oo dalkeenu ka mid yahay dadkeenuna aad u yaqaanaan wax tarkiisa, waxaana warbixinta caafimaadkiisa laga dhaxlay Hindida iyo Shiinayska oo weligood u adeegsan jiray in ay ku daaweeyaan xanuunno aan la soo koobi Karin muddo qarniyo ah. Laakiin cilmiga cusub, cilmi-baadhisyo dhowr ah oo lagu sameeyay sanjabiilka waxaa ka soo baxay dhowr arimood oo kal ah:
– Waxaa la ogaaday in sanjabiilka uu Alle ku abuuray 115 walxo oo faa’iido u leh caafimaadka laakiin waxaa ugu muhiimsan wax loo yaqaano “Gingerol” oo ka faa’iido badan daawooyin kiimiko ah oo hadda jira loona adeegsado xanuuno kala duwan in lagu daaweeyo.
-Maadada Gingerol waaa maaddo sun-saare iyo caabuq-dile xoog leh ah, waana xanuun baab’iye isku jira oo aad u wanaagsan!!!.
-Cudurka ugu horreeya oo sanjabiilku daawo u yahay ama ka hortag loogu adeegsado waa wadna xanuunka iyo wadna howl-gabka, waxa ay sanjabiilka, toonta iyo basashuba siyaadiyaan qulqulka dhiiga, waxayna la mid tahay daawada “Asprin-ka” ee la siiyo dadka wadnaha ka xanuunsan, waxay kaloo awood siiyaa murqaha wadnaha maadaam uu daciifay, waxayna u shaqeysaa sida daawo loo yaqaano “Digoxin” oo wadnaha murqahiisa ka shaqaysiiso, Waxay kaloo waasicisaa hal-bowlayaasha dhiigga qaada, waxayna qabataa daawooyinka wadnaha ee howshaas loo qaato oo loo yaqaano “Vasodilators”, sidaas awgeed sanjabiilku wuxuu kulansaday faa’iidada daawooyinkii loo wada qaadan jiray howlgabka wadnaha.
-Sanjabiilku wuxuu kaloo Alle SWT ku abuuray awood lalabo dajin iyo matag ka hortagid ah, waana sababta loogula taliyo in haweenku ay adeegsadaan ku kantaroollidda wallaca, maadaama daawooyinka badanaa lalabada iyo mataga loo qaato uurka ay saamayn ku yeelan karaan uur-jiifka, waxaa hooyada lagula taliyaa in ay isticmaasho sanjabiilka, waxaa jira kaniino laga sameeyay sanjabiilka oo laga helo waddamada qaar, laakiin waxaad baddalkooda isticmaali kartaa in sinjabiilka nooca qoyan aad biyo ka dhigto, kadibna biyahaas aad cabto markii yalaalugo/lalabo ku qabataba, sanjabiilka ha ruugin wuxuu kugu kicin karaa gaaska.
-Waxaa kaloo sanjabiilka loo adeegsadaa calool xanuunka, calool majiirka iyo dheefshiid xumada, iyadoo loo cabo sidii cabitaan oo kale, wuxuuna ka hortagaa laguna daweeyaa calool is-taaga.
-Dadka ka cawda dheefshiid xumada, waxaa lagula taliyaa in ay toonta iyo sanjabiilka badsadaan.
-Sanjabiilku wuxuu sare u qaadaa difaaca jidhka isagoo firfircooni galiya unuygyada difaaca jidhka ka qayb qaata khaas ahaan kuwa “lymphocytes-ka” loo yaqaano oo howshoodu ka mid tahay la dagaallanka feyrasyada, sidaas darteed hergabka iyo wixii la mid ah, sanjabiilku aad buu wax uga taraa.
-Cilmibaadhis lagu sameeyay awoodda antibiotic ahaan ee sanjabiilka waxaa lagu ogaaday inuu ka awood badan yahay daawooyinka ay ka mid yihiin: Ampicillin, Tetracycline iyo Chloramphenicol-ka, waxay dhakhaatiirtu yidhaahdaan haddii aad qalliin galaysid ama markaa qalliinka ka soo baxdid oo aad ka cabsi qabtid in aad infekshan ka qaadid meesha lagaa qalay, marso saliidda sanjabiilka, waxay ka awood badan tahay qallajiyayaasha la liqo, tani waxaa la mid ah oo baddalkeeda aad isticmaali kartaa saliidda hayl-dhagoolaha.
-Sanjabiilku wuxuu leeyahay awood uu kaga takhallusi karo jeermiska fangaska loo yaqaano oo badanaa keena caabuqyada maqaarka, waxuu sanjabiilku koobka u qaaday 29 daawo oo la barbardhigay awoodda jeermis dilidda fangaska.
-Sanjabiilka qoyani wuxuu bogsiiyaa nabrada caloosha ku samaysma oo gaasku uu keeno, waxaana baadhitaan lagu ogaaday arrintan sanadkii 1980-kii, waliba waxaa waagaas lagu taliyay in lagu baddalo daawo loo qaadan jiray laabjeexa oo loo yaqaano “Prevacid”
-Sanjabiilku waa xanuun baab’iye sida hayl-dhagoolaha oo kale, wuxuuna ku fiican yahay xanuunada ay neerfuhu keenaan.
-Sanjabiilku wuxuu kaloo siyaadiyaa awoodda hormoonka insulin-ka waxaana lagula taliyaa dadka qabo cudurka macaanka nooca 2-aad, in ay badsadaan sanjabiilka si shaqada hormoonka naaquska ahi u siyaado.
W/Q: Dr. Cabdilahi M. Mahdi
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/11/ginger.jpg 454 695 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-11-12 12:33:282016-11-12 12:33:28Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Layaabka Leh Ee Ku Duugan Hayl-Dhagoolaha Iyo Sinjibiilka
Ban Ki-moon oo waraaqaha aqoonsiga ee Danjirnimo ka guddoomay Yuusuf Garaad Madaxweyne Erdogan oo furay masjidkii ugu horeeyey oo Turkigu ka dhisay dalka...